Politika famerenam-bola - GoViral
Manolotra entana tsy azo kitihana azo tsapain-tanana izahay. Amin'ny maha mpanjifa anao, tompon'andraikitra amin'ny fahazoana izany ianao amin'ny fividianana vokatra / serivisy ao amin'ny tranokalanay.
FIVAROTANA NY FIVORIANA FIVORIANA
Ny 99% amin'ireo olana dia afaka mamaha amin'ny mailaka tsotra. Mangataka aminao izahay mba hanantona anay hampiasa anayMifandraisa aminay”Pejy. Ny departemanta an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia hiverina aminao ao anatin'ny 24-48 (matetika latsaky ny 24 ora) miaraka amin'ny famerenana ny ahiahinao ary ny vahaolana.
FIVORIANA MANARAKA INDRINDRA
Ny tsy fandefasana ny vokatra / serivisy: amin'ny tranga sasany dia miadana kokoa ny fotoana anaovana ny fizotrany, ary mety maharitra ela kokoa vao vita ny kaomandinao. Amin'ity tranga ity dia mamporisika ny hifandray aminay izahay raha mila fanampiana. Ny fangatahana tsy fandefasana dia tsy maintsy atolotra an-tsoratra ao amin'ny Departemantan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ao anatin'ny 7 andro aorian'ny fametrahana ny baiko.
Vokatra tsy voalaza-ny hoe: ny olana toy izany dia tokony hampandrenesina any amin'ny sampana serivisy ho an'ny mpanjifa ao anatin'ny 7 andro aorian'ny fotoana nividianana azy. Ny porofo mazava dia tsy maintsy omena porofo fa ny vokatra / serivisy novidy dia tsy voalaza ao amin'ny tranokala. Tsy ekena ny fitarainana izay mifototra amin'ny tsy ampoizin'ny mpanjifa na ny faniriany fotsiny.
Ny mpanjifa dia maniry ny hanafoana ny fandoavana ny vidin'ny vokatra / serivisy ary ao anatin'ny 7 andro taorian'ny fandoavana farany. Raha misy ny fangatahana famerenam-bola aorian'ny 7 andro dia tsy mahazo ny mpanjifa, fa ny fanafoanana kosa dia ho vita amin'ny faktiora rehetra amin'ny ho avy. Ny mpanjifa dia mety manohy mandray ny serivisy mandra-pahatapitry ny volan'ny faktiorany, na misafidy ny hiatoana eo noho eo ny vokatra / serivisy.
MITOMPOANA HO ANY FAMPISEHOANA